Mitambo yakabatsirwa kuburikidza neCorona: Gamescom "inopenya muenzaniso" - mutambo poindi - bhodhi mitambo nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Aug 26, 2021 | Gamescom muCologne, nhau, Vhidhiyo mitambo
Munguva dzeCorona, Gamescom 2021 ichaitika digitaalinen: Mushure mekuvhurwa kukuru neChipiri manheru murukova mhenyu, zvematongerwo enyika zvino zvavhurawo Cologne Games Fair. Kupfura kwekutanga kwakapfurwa nenguva na10 am - kubva zvino zvichienda mberi, mitambo ichapembererwa kwehafu yevhiki.
Mukuru wekutanga kupfurwa akapihwa neChitatu na10 am: gamescom 2021 yakavhurwa nevaenzi vezvematongerwo enyika vanoremekedzwa. Nekuda kwedenda rekorona, aGmescom ichaitika chete digitally, segore rapfuura. Kuvhurwa zviri pamutemo kwezvematongerwo enyika kwakaiswawo live. Chiratidziro chehafu yeawa chakaitwa nemuratidziri weTV Katrin Neumann, uyo akaita hurukuro mu studio pakati pekukwazisa kwevaenzi vezvematongerwo enyika vanoremekedzwa naFelix Falk, maneja maneja wemutambo - mubatanidzwa weindasitiri yemitambo yeGerman, murongi. kubva Gamescom. Kuvhurwa kwezvematongerwo enyika kweGamescom 2021 kunogona kutariswa sevhidhiyo-pane-inodiwa paGamescom izvozvi, hub yemukati meGamescom: now.gamescom.de.
Gamescom panzvimbo: tariro yegore rinotevera
Andreas Scheuer, Federal Minister of Transport and Digital Infrastructure, Digital State Minister Dorothee Bär, Armin Laschet, Prime Minister weNorth Rhine-Westphalia, pamwe naShe Mayor weCologne uye Sachigaro weKoelnmesse Supervisory Board, Henriette Reker uye COO uye Managing Director we. Koelnmesse, vaivepo pakuvhurwa kwezvematongerwo enyika mune dijitari fomu Oliver Frese. Mukukwazisa kwavo, vaenzi vezvematongerwo enyika vanoremekedzwa - chokwadi kune dingindira regore rino "Mitambo: Iyo New Normality" - yakataura nezve mukana mukuru wemitambo yeGermany uye kuti izvi zvinofanirwa kuwedzerwa zvakanyanya mune ramangwana.
Corona yasiya mucherechedzo wayo, zvakare muchikamu chemitambo. Unoziva sei kuti pane chiri kushaikwa gore rino? Pamusoro pazvo: Pasinei nepurogiramu yakakura yedhijitari yeGamescom, tariro yakaratidzwa kuti mugore rinouya tichazokwanisa kupemberera zvakare panzvimbo yeCologne nemazana ezviuru zvevashanyi.
Andreas Scheuer, Federal Minister for Transport and Digital Infrastructure: “Sechiitiko chikurusa chemitambo pasi rose, Gamescom ndiye munhu akakwana. Tinoda kuvakira pane izvi uye zvakare kubata pasi rose senzvimbo yekusimudzira mune ramangwana. Gore rakapera ndakapa mvumo yechikamu chechipiri chemari yemitambo yedu pano panguva imwe chete. Kubva ipapo, hurumende yemubatanidzwa yanga ichipa mari masitudiyo ekusimudzira mitambo anokosha mamiriyoni. Uku ndiko kubudirira chaiko. Kubva nhasi, mamirioni makumi mana akatenderwa - isu tinotarisira kune zvimwe zvikumbiro. Pamusoro penyaya dzemari, isu takazvimisikidza zvakare zvine hungwaru uye nekubatanidza hunyanzvi mukambani yedu mune imwe yuniti yemitambo yakasiyana. Nekuti ndine chokwadi: Tinogona kubatsirwa kubva mukusimba kweiyo indasitiri yemitambo munzvimbo dzakawanda - ingave mudzidzo, indasitiri nesainzi kana munguva yedu yemahara.
Dorothee Bär, Minister of State for Digitization muFederal Government: "Dingindira guru reGamescom 2021 rinosvika padanho: Mitambo ndiyo nyowani yakajairika. Matibatsira kuramba tichionana neshamwari uye nemhuri panguva yeCorona. Sezvineiwo takava nemitambo panguva iyoyo! Mitambo haisi iyo chete yakajairika senzira yekuvaraidza, asiwo mubhizinesi, mushonga uye dzidzo. Semuyenzaniso, makambani akawanda ari 'kutamba' zvigadzirwa zvawo - kubva kufitness apps kuenda kumota uye maturusi emusangano wevhidhiyo. Kushandiswa kwemitambo muzvidzidzo kunonyanya kufadza: nokuti izvo zvinokurudzira mitambo zvine simba rakananga pakudzidza kubudirira, kwete chete kuvana, asiwo mukudzidziswa uye kuwedzera dzidzo. Mitambo saka inopa yakakura simba rekuvandudza, sezvakaratidzwa zvisingaite nedigital Gamescom pachayo, uye isu tinofanirwa kushandisa mukana uyu zvakanyanya. Ndosaka tichida kuenderera mberi nekusimudzira indasitiri yemitambo muGermany uye nekudaro tinobata zvepasirese senzvimbo. Nehurongwa hutsva hwemitambo, takagadzira hwaro hwakanakisa hweizvi kwemakore anotevera. "
"Gamescom muenzaniso wakajeka weiyo yakasimba nzanga yemitambo yemakomputa nemavhidhiyo yakabatsira vanhu vazhinji pasi rese kuburikidza nedenda rekorona."
Armin Laschet, Mutungamiriri weNorth Rhine-Westphalia
Armin Laschet, Mutungamiriri weNyika yeNorth Rhine-Westphalia: "Gamescom muenzaniso unopenya wechikamu chakasimba chemagariro emakombuta nemavhidhiyo mitambo yakabatsira vanhu vazhinji pasi rese kuburikidza nedenda reCorona. Iyi mhando yenharaunda ndicho chivakwa chakakosha chenharaunda yedu. Indasitiri yemitambo zvakare ine hukuru hwehupfumi uye hwemagariro mukana - kwete chete mukukura kwemitambo yemitambo, asiwo kupfuura. Muenzaniso wakanakisa weizvi inzvimbo yedzidzo yedhijitari: kudzidza kuburikidza nekutamba hunhu hwevanhu uye ndosaka tichifanira kushandisa zvirinani zvinogoneka uye kusatya nzira nyowani. Pano zvakare, indasitiri yemitambo ichaita basa rakakosha mune ramangwana. Nekuda kwekugona kukuru uku, isu tinofanirwa kuramba tichishanda pamamiriro ehurongwa hweindasitiri yemitambo. Ndosaka isu muNorth Rhine-Westphalia takaisa chinangwa chekuve nhamba yekutanga nzvimbo yemitambo muGermany makore mashoma apfuura. Isu tinodawo chinangwa chakajeka ichi padanho remubatanidzwa kuti tibude pamusoro mumakwikwi epasi rose. "
Felix Falk, maneja maneja wemutambo - Sangano reGerman Games Indasitiri, murongi weGamescom: "Gamescom yave kutanga uye nemazuva akazara nezviziviso, nhau uye zviratidzo izvo vateveri vakatomirira. Pamwe chete nevatinoshanda navo, tiri kugadzira chiitiko apo mamirioni evatambi pasi rese anogona zvakare kupemberera mitambo yakanakisa. Asi paGamescom iyi hatisi kungoda kutaura nezvemitambo, asiwo nezvemitambo yakakodzera uye mutemo wedhijitari weGermany uine sarudzo dzemubatanidzwa dziri kuuya. Naizvozvo ndinonyanya kufadzwa kuti isu tinogona zvakare kugamuchira vazhinji vezvematongerwo enyika vepamusoro kwete chete kuKuvhurwa kwezvematongerwo enyika, asiwo kuDebatt (l) e Royale neChishanu. Nemafomati akadai, tinoda kupa chizvarwa chechidiki mikana yakakwana yekuumba pfungwa uye kutumira meseji yakajeka: Enda kunovhota!
Henriette Reker, Lord Mayor weGuta reCologne uye Sachigaro weKoelnmesse Supervisory Board: “Ndiri kufara zvikuru nezvakaitwa neKoelnmesse yese, timu yeGamescom, mubatanidzwa wemutambo pamwe nevamwe vese vakabatikana. Ndizvo chaizvo izvi mweya wekuvandudza nehushingi hwatinofanira kufambira mberi senzanga munguva dzino dzakaoma. Panguva imwecheteyo, handigoni kumirira kuona vatambi vakawanda muguta zvakare. Kwete chete nekuti ivo vanogara vaine yakasarudzika flair uye guta rese rinotapukirwa nekufarira kwavo. Asi zvakare nekuti Cologne inobatsira kubva kuGamescom uye vateveri vayo pamatanho mazhinji: Gastronomy, hotera uye zvitoro ingori dzimwe dzenzvimbo dzinowana kukwidziridzwa kukuru, kunyanya panguva dzekutengeserana fairs.
Oliver Frese, COO uye Maneja Director weKoelnmesse: "Kechipiri akateedzana, Gamescom 2021 ichaitika digitally. Asi chokwadi isu hatisati taita basa kubvira gore rapfuura uye takafambira mberi zvikuru neGamescom 2021 nezvipo zvayo zvedhijitari! Kunyangwe ingave mashoo edu, yedu yemukati hub Gamescom izvozvi kana zviitiko zvenharaunda seGamescom Epix - kwese kwatakashandisa ruzivo rwegore rapfuura nehafu uye takavandudza chirongwa chedu. Nekuti chinangwa chedu chakajeka: Isu hatidi chete kuve munzvimbo yepamusoro mubhizimusi rekutengeserana mune zvese, asi zvakare mune ramangwana nekuona zviitiko zvedhijitari! "
Kare Indie Arena Booth paGamescom: Mazuva mana emitambo yeindie
Inotevera Marvel's Midnight Suns: Tactical RPG ine magamba enyambo
Pokemon Go yafa? Uri kundinyengerera here iwe? -Niantic inotumira rekodhi kutengesa
Kickstarter yeIyo Imwe Mhete ndiyo yakanyanya kubudirira tabletop RPG